Saturday June 13, 2020 - 06:33:09 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Safaaradda Mareykanka ee dalka Jabuuti ayaa digniin ay soo saartay ugu baaqday muwaadiniinteeda ku sugan Jabuuti in aysan sameyn wax dhaq dhaqaaq ah , dadka Mareykanka ah waxaa looga digay in ay tagaan fagaarayaasha magaalooyinja wadankaas ee dibad baxyadu ka socdaan.
Xaafadaha laga mamnuucay dadka Americanka ah waxaa kamid ah PK12, Xayabalaay, Balbala Caadi, Sheekh Muuse iyo garoonka Guuleed, Mareykanku wuxuu sheegay in inta ay socdaan dibad baxyada rashadaha wata ay dhici karto in ciidamada ammaanka ay adeegsadaan awood xad dhaaf ah kadibna waxyeello kasoo gaarto dadka ajnabiga ah.
Kooxaha mucaaradka dalka Jabuuti ayaa dhigaya dibad baxyo ka dhan ah Ismaaciil Cumar Geelle, tan iyo markii laxiray sarkaal katirsan ciidanka cirka Jabuuti oo lagu magacaabo Fu'aad Yuusuf Cali ayay rabshada wadankaas ka jira sare usii kacayeen.
Mareykanka oo dhaleeceeyay tallaabadii Kheyre lagu riday Hanjabaadna kululna jeediyay.
Cudurka Carona oo halaag hor leh ka geysanaya dalka Mareykanka.